Gianluigi Buffon ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပင်မစာမျက်နှာ ဥရောပဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အီတလီဘောလုံးကစားသမားများ Gianluigi Buffon ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Gianluigi Buffon ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB အကောင်းဆုံး NICKNAME အားဖြင့်လူသိများနေတဲ့ဘောလုံးအဆို့၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်; "Gigi, က Superman". ကျွန်ုပ်တို့၏ Gianluigi Buffon ကလေးဘဝပုံပြင်နှင့်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့သူ့ရဲ့ကလေးဘဝအချိန်ထဲကနေသည့်ရက်စွဲမကုန်မှီတိုင်အောင်သင့်အားထူးဆန်းသောဖြစ်ရပ်များနှင့်ပြည့်ဝ၏အကောင့်ဆောင်ခဲ့ရမည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကျော်ကြားမှု, မိသားစုဘဝနှင့်များစွာသော OFF နှင့်သူ့ကိုအကြောင်းကို ON-အသံနည်းနည်း-လူသိများအချက်အလက်များရှေ့တော်၌မိမိဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝငျသညျ။
ဟုတ်ပါတယ်, တိုင်းမိမိအရည်အချင်းများအကြောင်းကိုသိတယ်ဒါပေမယ့်သာအနည်းငယ်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သော LB ရဲ့ Buffon အတ္ထုပ္ပတ္တိစဉ်းစားပါ။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ်ခွင့်ပန်ပြီးမှမရှိဘဲရဲ့ Begin ကြကုန်အံ့။
Gianluigi Buffon ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ဘ0အစပိုင်း
Gianluigi "Gigi" Buffon မာရီယာ Stella Buffon (မိခင်) နှင့် Adriano Buffon (ဖခင်) က Carrara, အီတလီအတွက်ဇန်နဝါရီလ 28 ၏ 1978th နေ့၌ဖွားမြင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါအီတလီဒဏ္ဍာရီအဆို့အီတလီအားကစားသမားတစ်ဦးကြွယ်ဝသောမိသားစုသို့မွေးဖွားခဲ့သည်။ မယ်တော်မာရီယာ Stella တစ်ဝိုင်းတစ်ခုမှာနှင့်သူ၏ဖခင်, Adriano တစ်ကျော်ကြားတဲ့အီတလီအလေးမဖြစ်ခဲ့သည်။
အိမ်တော်ကလေးအဖြစ်, Gigi ကသူ့မိဘတွေနဲ့အတူနေတဲ့အံ့သြဖွယ်ကြားဆက်ဆံရေး, သဘာဝသူမ၏နောက်ဆုံးကလေးအတှကျပျော့ပျောင်းအစက်အပြောက်ခဲ့သူကိုအထူးသဖြင့်မိမိအ mum, ပျော်မွေ့ခဲ့သည်။ အောက်တွင်သည်သူ၏မွေးနေ့အပေါ်သူ၏မိခင်အားဖြင့် pampered ခံတစ်ဦးကလေးဘဝ Buffon ၏ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါသည်။
Little က Gianluigi Buffon နှင့်မိခင် (သူ၏မွေးနေ့တွင်)
အားကစားအာရုံစောစောရှုပ်ထွေးနေသော်လည်းသူနှလုံးဘောလုံးနှင့်အတူသွားလေ၏။ ကိုယ့်ကိုခြောက်နှစ်သမီးအရွယ်မှာ Buffon ၏မိဘများသည်သူတစ်ဦးကွင်းလယ်လူအဖြစ်သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖို့ချောချောမွေ့မွေ့စတင်ခဲ့ရှိရာ Canaletto di, La Spezia ဘောလုံးကျောင်းမှာသူ့ကိုစာရင်းသွင်း။
Buffon ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -အလုပ်ရှာဖွေရေးအကျဉ်းချုပ်
အမှန်အတိုင်းလိမ့်မည်။ Gigi တစ်ကွင်းလယ်ကစားသမားအဖြစ်ထွက်စတင်ခဲ့ပြီးနှင့်ဘယ်တော့မှတစ်ဂိုးသမားအဖြစ်။ ဤသည်တို့အတွက်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည် ဒါဝိဒ်သည် De Gea။ Beow သူတစ်ဦးကွင်းလယ်လူအခါငယ်ရွယ် Buffon ၏ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါသည်။
တစ်အလယ်တန်းအဖြစ် Young က Buffon
သူ Veneto ကနေအကောင်းဆုံးလူငယ်ကစားသမားများအတွက်ပြိုင်ပွဲများတွင်အဟောင်း 10 နှစ်ပေါင်းမှာစန်း Siro မှာသူ၏ပထမဦးဆုံးပွဲစဉ်ကစားခဲ့။ နှစ်နှစ်အကြာတွင် Buffon သည်သူ၏ရုပ်တုကို, ကင်မရွန်းဂိုးသမားရှာဖွေတွေ့ရှိ သောမတ်စ် N'Konoအဆိုပါ 1990 ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက်ကစားသူကို။
Buffon ရဲ့ Idol- သောမတ်စ် N'Kono ၏ပုံပြင်
သောမတ်စ်တစ်ဂိုးသမားတစ်ကွင်းလယ်ကစားသမားအနေဖြင့် Buffon ရဲ့ပြောင်းလဲမှုအနေအထားများအတွက်တာဝန်ရှိဖြစ်ခဲ့သည်။ အီတလီ၏မြေတပြင်လုံးတုန်းပဲယနေ့အထိသူ့ကိုပေးဆပ်ရန်ကြွေးတင်နေသည်။
နှစ်ဦးစလုံးဦးပထမဦးဆုံးအသင်းဂိုးသမားဒဏ်ရာတက်ခူးပြီးနောက် Buffon သည်သူ၏ရည်မှန်းချက်-စောင့်ရှောက်ပွဲဦးထွက်စေတော်မူ၏။ အထင်ကြီးပရိတ်သတ်တွေ့နှစ်ပတ်အတွင်းပြီးနောက်သူဟာအမြဲတမ်း starter ဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့်မယ့်တဦးတည်း, ဒါပေမယ့်နှစ်ခုမှအကြီးတန်းဂိုးသမားသူ့အဖွဲ့မှာရှိတဲ့အိုးအိမ်မဲ့။ သူကဒီအချိန်မှာအသက်အရွယ် 16 ဖြစ်ခဲ့သည်။
သူသည်အီတာလီယာဒုတိယနှင့်ယူအီးအက်ဖ်အေဖလားအနိုင်ရကူညီပေးခဲ့သည်သည့်အခါ Parma မှာငယ်ရွယ်အီတလီဂိုးသမားရဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးအောင်မြင်မှု, ကလပ်မှာမိမိစတုတ္ထရာသီလာ၏။ ဒါဟာရာသီ Parma ရဲ့ကစားသမား Juan Sebastian Veron, Hernan Crespo, Lillian Thuram နှင့် Fabio Cannavaro များ၏အကြိုက်ဝါကြွားရသောအခါတစ်ကြိမ်ရောက်လေ၏။ အဝါရောင်နှင့်အပြာရောင်ရဲ့အနည်းဆုံးနှစ်ခုထက်ပိုသောအထင်ကြီးရာသီပြီးနောက် Buffon တစ်ခုအံ့သြ 50 ယူရိုသန်း (အချိန်မှာဂိုးသမားတစ်ဦးစံချိန်သစ်) အတွက်ဂျူဗင်တပ်စ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရသည်။
Gianluigi Buffon ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts-မိသားစုဘဝ
အီတလီအားကစားသမားများကောင်းစွာနှစ်ပေါင်းများစွာပေးဆောင်ပြီ။ ဂုဏျအားကစားသမားများမှာသူတစ်ဦးမိခင်နှင့်အဖေရှိခြင်းစာသားတစ်ကြွယ်ဝသောမိသားစုနောက်ခံကနေလာမယ့်ဆိုလိုပါတယ်။ ဤသည် Gianluigi Buffon ၏ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤတွင်, ငါတို့သည်သင်တို့ Gigi ရဲ့မိဘများသို့တစ်ခုထိုးထွင်းသိမြင်ပေးပါ။
ဖခင်: Buffon ရဲ့အဖေ, Adriano Buffon တစ်ဦးအလေးမဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ Masocco Giorgio အားဖြင့် Latisana, အီတလီအတွက် 15th စက်တင်ဘာ 1945 (ဖခင်) နှင့် Paolini ထရေဇာ (မိခင်) ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ အောက်တွင်ငယ်ရွယ် Adriano ၏ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါသည်။
Gianluigi Buffon ရဲ့ခမညျးတျော - Adriano Buffon
မိမိအအားကစားအနားယူအပြီးတွင် Adriano တစ် PE ကျောင်းမှာဆရာမအဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Mother: Gigi ရဲ့မိခင်မာရီယာ Stella Buffon ကိုလည်းနိုင်ငံတော်အဆင့်မှာအီတလီကိုယ်စားပြုသူတစ်ဝိုင်းတစ်ခုမှာဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည်သူမ၏အနားယူပြီးနောက် PE ကျောင်းမှာဆရာမအဖြစ်အလုပ်လုပ်သူမခင်ပွန်း၌မှီဝဲ။
Gianluigi Buffon ရဲ့မိခင်များနေ့ - Stella မာရီယာ Buffon
အောက်တွင် Gigi ရဲ့အားကစားမိဘများမစ္စတာနှင့်မစ္စ Adriano Buffon တစ်ဦးသည်ခေတ်သစ်နေ့ရက်ကိုဓာတ်ပုံတစ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။
Gianluigi Buffon ရဲ့မိဘများ၏လက်ရှိတစ်နေ့လျှင်ရူပ
အစ်မ: Gigi သူ့မိသားစု၏တစ်ခုတည်းသောသားဖြစ်၏။ Guendalina Buffon Gigi ရန်ကြီးအစ်မဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည် 1973 မွေးဖွားခဲ့သည်။ အောက်တွင်သူမ၏နှင့်သူမ၏ဆိအစ်ကိုနဲ့အီတလီအမျိုးသားရေးသူရဲကောင်း '' Gigi '' ၏ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါသည်။
Guendalina Buffon နှင့်သူမ၏အစ်ကို '' Gigi ''
အောက်တွင် Buffon ညီအစ်မ, Veronica Buffon ၏ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါသည်။ သူမသည် 1975 မွေးဖွားခဲ့သည်။ Veronica Buffon အီတလီအမျိုးသားရေးဘော်လီဘောအသင်းများအတွက်ဘော်လီဘောကစားခဲ့ပါတယ်။
Gigi ရဲ့ချက်ချင်းအကွီးအကဲ sister- Veronica Buffon
ဦးလေး: Gigi Buffon Dante Masocco လို့ခေါ်တဲ့ဦးလေးရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်သူသည်အီတလီနိုင်ငံလက်ရွေးစင်အသင်းကိုကိုယ်စားပြုသူအစီးရီးအေ A1 အတွက်တစ်ဘတ်စကက်ဘောကစားသမားဖြစ်ခဲ့သည်။
Gigi Buffon ၏ဘထွေး, Dante Masocco
ဝမ်းကွဲ: ဟောင်းများအင်တာမီလန်မီလန်နှင့်အီတလီဂိုးသမားဒဏ္ဍာရီ Lorenzo Buffon Gianluigi Buffon ရဲ့အဘိုးတစ်ဝမ်းကွဲဖြစ်ပါတယ်။
Gigi ရဲ့ Buffon ရဲ့ဝမ်းကွဲ -Lorenzo Buffon
Gianluigi Buffon ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -relationship ဘဝ
Gigi ကြွယ်ဝသောအလွန်ချောမောသည်။ ဒါဟာဆိုလိုခြင်းဖြင့်မိမိအသက်တာတစ်လျှောက်လုံးကြားဆက်ဆံရေးပြဿနာများဖြစ်ရှိခညျြနှောငျဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုသည်။ ကျွန်တော်တို့သည်အသငျသညျမှသူ၏ဆကျဆံရေးအသက်တာ၏အသေးစိတျကိုတင်ပြ။
သူ Alena Seredova နှင့်အတူမေတ္တာ၌တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကျဆင်းသွားသည့်အခါ Gigi Buffon ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဇာတ်လမ်းကိုပြန် 2005 မှစတငျ။ Alena ပထမဦးဆုံး 1998 အတွက်အလှမယ်ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၏ပြေးသမား-Up နှင့်အလှမယ်ကမ္ဘာ့ဖလား 1998 မှာသူမ၏နိုင်ငံ၏ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
Gigi Buffon နှင့် Alena Seredova
Gigi ပရာ့ဂ်၌, ဇွန်လ 16, 2011 အပေါ် Alena Seredova လက်ထပ်တယ်။ ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်သားသမီးတို့, လူးဝစ်သောမတ်စ် (2007 မွေးဖွား) နှင့်ဒါဝိဒ်သည် Lee က (2009 ဖွား) ရှိသည်။
Gigi နှင့်သူ၏လေးတွေ, သောမတ်စ် (ညာ) နှင့်ဒါဝိဒ်သည် (လက်ဝဲ)
သူ၏ပထမဦးဆုံးကလေးက '' သောမတ်စ် '' Gigi Buffon ရဲ့ရုပ်တုကိုသောမတ်စ် N'Kono ပြီးနောက်အမည်ရှိခဲ့သည်။ သူကနှစ်ဦးစလုံးသားတို့နှငျ့အတူဆော့ကစားရန်အချိန်ထွက်စေသည်။ သူချိုးပေါ်မှာစဉ်ဤ majorly တွေ့ကြုံတတ်၏။
မေလ 2014 တွင်, Buffon သည်သူ၏ကြင်ဖော်နဲ့ကွာရှင်းရဖို့ကြေညာခဲ့သည်။ သူတို့ လက်ထပ်ထိမ်းမြား၏သုံးနှစ်လွန်ပြီးမှကွဲကွာ။
သူကမကြာခင် Romantic အီတလီပြိုင်ကား pundit, သတင်းစာဆရာနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအိမ်ရှင် Ilaria က D'Amico ချိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
အီတလီ, Buffon နှင့် D'Amico အတွက်မဂ္ဂဇင်းအဆိုအရများမှာ "ယုန်ကဲ့သို့" အိမ်နီးချင်းသူတို့ရဲ့မေတ္တာချမှတ်ခြင်း၏ဆူညံသံနှင့်ပတ်သက်ပြီးတိုင်ကြားမှစတင်ခဲ့ပါပြီ။
2015 ခုနှစ်, Buffon စုံတွဲအတူတူကလေးတစ်ဦးမျှော်လင့်ခဲ့ကြကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။6ဇန်နဝါရီလ 2016 တွင်စုံတွဲတစ်တွဲကို Twitter ပေါ်တွင်သူတို့၏သား Leopoldo Mattia အစောပိုင်းကထိုညန၏မွေးဖွားကြေညာခဲ့သည်။
2017 ၏နွေရာသီမှာတော့ပု pair တစုံဆောင်ရွက်နေဖြစ်လာခဲ့သည်။ Šeredováမှသူ၏ဆကျဆံရေးနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်မတိုင်မီက Buffon လည်းယခင်ကအီတလီအမျိုးသားရေးအားကစားသမားအဖွဲ့ Vincenza Calìနေ Sprinter စေ့စပ်ခဲ့သညျ။
Gianluigi Buffon ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -2003 / 2004 ရာသီ
2013 ခုနှစ်, Buffon သူ 2003 ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲအတွက်ဂျူဗင်တပ်စ် '' ပင်နယ်တီရိုက်ကူးထွက်ရှုံးနိမ့်ပြီးနောက်ယင်း 04-2003 ရာသီအတွင်းစိတ်ကျရောဂါ၏အကြိမ်ကြိမ်ခံစားခဲ့ရဖူးထင်ရှားနှင့်ကြောင့်ကြောင်းရာသီဂျူဗင်တပ်စ်ရဲ့အနုတ်လက္ခဏာစွမ်းဆောင်ရည်ရန်။
Buffon မှန်မှန်စိတ်ပညာရှင်တစ်ဦးလည်ပတ်ခဲ့ပေမယ့်ဆေးဝါးကိုယူရန်ငြင်းဆန်နှင့်ကြိုတင်ယူရို 2004 အားမိမိစိတ်ကျရောဂါလုပ်ကြံ
Gianluigi Buffon ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -စပျစ်ရည်ကိုစီးပွားရေး
ရုံနဲ့တူ Andrea Pirlo နှင့် Andres Iniestaအောက်ကပုံထဲမှာမြင်ကြသကဲ့သို့, Buffon လည်းသူ့ကိုယ်ပိုင်သောစပျစ်ရည်တစ်ခွက် savors ။
Gigi Buffon မှစ. ယ်စလီ Sneijder ရန်, အိုင်ဗင် Zamorano မှ: ဘောလုံး၏ပိုပိုပြီးချန်ပီယံယနေ့မိမိတို့၏အမည်များတံဆိပ်များအဖြစ်စပျစ်ရည်ကိုပုလင်းအတွင်း crested မြင်ကြပြီ။
မကြာသေးမီက 2017 ခုနှစ်, Buffon နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. "Buffon #1" အောက်မှာစပျစ်ရည်ကိုသူ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
Gianluigi Buffon ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးမှတစ်ဦးကမိတ်ဆွေ
Buffon ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကက်သလစ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Francis ကတစ်မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးအားလုံးဘောလုံးကွင်းများနှင့်ဘာသာတရား၏ထီးအောက်မှာ 2013 အတွက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
Gianluigi Buffon ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -Play ကို၏စတိုင်နဲ့ Reception
သူ့လူငယ်တစ်ဦး ပတျသကျ. အခွက်တဆယ်အဖြစ်သူ၏ပေါ်ပေါက်ရေးကတည်းက Buffon သူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတစ်လျှောက်လုံးမိမိအတသမတ်တည်းဖျော်ဖြေပွဲများအတွက်ကျော်ကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါဒဏ္ဍာရီမန်နေဂျာကစားသမားအဖြစ်နှစ်ဦးစလုံးလက်ရှိနှင့်ယခင်ဂိုးသမားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များထံမှဂုဏ်ကျေးဇူးကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဤသည်ကသူ့အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အေးဆေးတည်ငြိမ်ဣန္ဒြေဖိအားအောက်တွင်အဖြစ်မိမိအလုပ်-မှုနှုန်းနှင့်အသက်ရှည်ဘို့ဖြစ်၏။
Gianluigi Buffon ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ရှပ်အင်္ကျီအရေအတွက်ပြဿနာ
Parma, အများအတွက်, အစားကသူ၏ယခင်အရေအတွက်ကို 88 ရှပ်အင်္ကျီထက်, အရေအတွက်အား 1 ရှပ်အင်္ကျီဝတ်ဆင်ရန် Buffon ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှာနေစဉ် 2000-01 ရာသီ အီတလီမှာအငြင်းပွားဖွယ်ရာစေ၏။
Buffon, သို့သော်, 88 ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏အကျင့်စာရိတ္တနှင့် attribute တွေ၏သင်္ကေတဖြစ်သော "လေးယောက်ဘောလုံး" ကိုကိုယ်စားပြုကြောင်းဖော်ပြထားသည်, အရေအတွက်ကိုရဲ့နာဇီလက်သစ် connotations မသိဖြစ်ပြောဆိုထားသည်။ သူကသူတို့ကြိုတင်ယူရို 2000 ရန်သူ၏ဒဏ်ရာပြီးနောက်သူတို့မှာလည်းသူ့ရဲ့ "တစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်း" ကိုကိုယ်စားပြုဤဂုဏ်တော်သည်မိမိလိုအပ်ချက်ဆိုလိုဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ဖော်ပြခဲ့သည်။
သူကနောက်ပိုင်းတွင်နံပါတ်များကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်, အဆိုပါရွေးချယ်ခြင်း ကစားသမားအရေအတွက်ကို 77 ။
Gianluigi Buffon ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ဒီလောက်စွန့်ထောင်မှဝါကျ
2000 ခုနှစ်, Buffon Parma တက္ကသိုလ်ဥပဒေဘွဲ့များအတွက်စာရင်းသွင်းနိုင်ရန်အတွက်အထက်တန်းကျောင်းစာရင်းကိုင်ဒီပလိုမာတိမ်များအတွက်လေးနှစ်ထောင်ဒဏ်စွန်။
သူ 3,500 အတွက် 2001 ယူရိုဒဏ်ငွေပေးဆောင်။ သူကနောက်ပိုင်းမှာမိမိအအကြီးမားဆုံးနောင်တအဖြစ်အဖြစ်အပျက်ဖော်ပြခဲ့သည်။
Gianluigi Buffon ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -တရားမဝင်လောင်းကစား
၏အမြင့်စဉ်အတွင်း 12 မေလ 2006, တွင် Calciopoli ရှုတျခပြွောဆိုခွငျး, Buffon တရားမဝင်စီးရီးအေအပေါ်လောင်းကစား၏စွပ်စွဲခဲ့သည်ပိုင်းတွင်အန္တရာယ်မှာအီတလီနိုင်ငံရဲ့ 2006 ကမ္ဘာ့ဖလားကစားသမားအတွက်မိမိနေရာမှထားသောတိုက်စစ်ပါတယ်။
Buffon တရားဝင်စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းနှင့်အားကစားပွဲအပေါ်ကစားနည်းအားမရဝန်ခံခဲ့သည်။ ဒါဟာဘောလုံးကစားသမားအောက်တိုဘာလ 2005 ကတည်းကလောင်းကစားခြင်းမှတားမြစ်ထားခဲ့ကိုယ်တော်ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Buffon ဒီဇင်ဘာလ 2006 အားလုံးကိုစွဲချက်၏ရှင်းလင်းခဲ့သည်။
Gianluigi Buffon ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ဘောလုံးနိုင်ငံရေး
7 မေလ 2012 တွင်, Buffon အီတလီဘောလုံးသမား '' အသင်း (AIC) ၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရသည်။ ဒါကတစ်ဦးတက်ကြွဘောလုံးသမားဒီအနေအထားကျင်းပခဲ့သောပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ထိုနှစ်တွင်ပင်, Buffon အဆိုပါလာရောက်ပူးပေါင်း "လေးစားမတူကွဲပြားခြင်း" ဘောလုံးကွင်းထဲမှာလူမျိုးရေးခွဲခြားမှု, ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများနှင့်သည်းမခံဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ယူအီးအက်ဖ်အေမှတဆင့်အစီအစဉ်။
Gianluigi Buffon ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -မိမိအ Progidy
Gianluigi Buffon သည်သူ၏နာမည်နှင့်တူသောအမိနိုင်ငံသား Gianluigi Donnarumma အတွက်ရှေ့ပြေးတောက်ပသောအနာဂတ်ကိုကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည်။ '' အေစီမီလန်ဂိုးသမား Donnarumma ငါ၏သားဖြစ်နိုင်ပါတယ် '' - Gianluigi Buffon ကပြောပါတယ်။
ဒါဟာအေစီမီလန်ဂိုးသမား Buffon နှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိမှအဖြစ်ရေပန်းစားအင်တာနက်ရှာဖွေရေးဖြစ်လာသည်။
အဆိုပါအေစီမီလန်ဂိုးသမား၏အဆိုအရ ... "ငါသည် Gigi အတူကြီးမြတ်အဆင်ပြေရှိသည်။ သူကအမြဲငါ့ကိုအကြံဉာဏ်ကိုပေးသည်နှင့်ယျတျောသညျအကြှနျုပျတို့အမည်တူဝေမျှနှင့်ဆက်စပ်နေကြသည်မဟုတ်တောင်မှသူ့အစ်ကိုကဲ့သို့ငါ့ကိုဆကျဆံတယျ။ ငါ့မှာရှိတယ် ကြိုးစားခဲ့ သူကလေ့ကျင့်သင်တန်းအတွက်ကိုငါတစ်သူရဲကောင်းဖြစ်ခြင်းများအတွက်သူ့ကိုကျေးဇူးတင်လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုစောင့်ကြည့်ဖို့။ လူတိုင်းကိုယ့် Gigi ရဲ့အမွေဆက်ခံသူ, သူ့သားသို့မဟုတ်အစ်ကိုရယ်ကပြောပါတယ်။ ကန့်အဖြစ်, အခုတော့ငါသာမီလန်အာရုံစိုက်နေပါတယ်ထိုကောင်းသောအကျင့် အဖွဲ့ ကျွန်မကလေးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်ကတည်းကငါထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ ငါထိပ်တန်းကလပ်မှာပြီးသားဖြစ်၏။ "
ကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်မှန်မကြည့်ပါဘူးတစ်ခုခုတွေ့မြင်လျှင်, ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ!
Stephan El Shaarawy ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်